Ngaba ukhathele "ngomkhombe omnye"? Ujikeleze wena ujikeleze amadoda atshatileyo, kwaye unqume ukutshata nje ngebhacala? Ewe, kulungile, kutheni ufuna omnye umntu, ukuba kukho iindawo ezikhululekile. Ngoku iinjongo zakho eziphambili kukukhohlisa isicachelor kwaye zikhokele ekubeni nobuhlobo obunzulu.
Ngaphambi kokuba uhambe "ukuzingela," kufuneka uthathe isigqibo sokuba yeyiphi indoda oyifunayo. Thatha icwecwe lephepha, ulwahlule zibe ngamacandelo amabini, enye ibhale phantsi iziphi iimpawu, iminqweno, inkcazo yokubonakala kwakho oyithandayo, kwelinye, elingenalo. Ngoko ufumana umfanekiso wesilisa. Kungenzeka ukuba, amadoda anempawu ezinjalo kunye nawe, kodwa ngokuqinisekileyo uya kubonakala. Ngoko, ngokukhawuleza uyazi i-bachelor, kwaye ngokuthe ngcembe ulwalamano lwakho lukhula lube ngaphezu kohlobo. Uyaqiniseka ukuba lo ngumntu wamaphupha akho, kodwa ngenxa yesizathu esithile uyanqikaza ngesiphakamiso sesandla nentliziyo.
Ukunciphisa i-bachelor kunye nokumkhokelela ekubeni nobudlelwane obunzulu kufuneka kube ngokuthe ngcembe, kungabonakali, kwaye kukhanye. Amadoda, ngokwezibalo, kwaye kuncinci, kodwa ukuba ulahlekelwa ngumntu owayekulindeleke. Gcina ukhumbule ukuba ukusuka kwiminithi yokuqala yokunxibelelana nomfundi oqalayo ukuqala ukuvavanya ukuhambelana nokuphila kwakhe. I-bachelor yanamhlanje iyonwabile ngendlela aphila ngayo. Unethuba elaneleyo lokuthetha kunye namadoda nabasetyhini. Akafumani naluphi na ubunzima bezinto eziphathekayo, akafumani neengxaki zokugcina indlu nokupheka. Ukubonisa umdla obonakalayo kuwe, uya kuqala ukukubukela-awuyi kuyenza inkululeko ebomini bakhe obuhle.
Ukudukisa i-bachelor, kuya kufuneka ube ngumdlali wangempela. Iminqweno eqhelekileyo inokusondeza kunye. I-bachelor, bahlala beninzi, uyabaxabisa kwaye azama ukuvakalisa. Qaphela kwaye uzame ukuqaphela zonke "izinto ezincinci", kuba ziya kukunceda ukhethe "izitshixo" ezifanelekileyo. Ngesinye isikhathi esendlwini yakhe, nokuba kunjani na, musa ukugxekisa imeko, ukulungiswa, kwaye unganikeli ngcebiso malunga nendlela yokwenza ukhululeke ngakumbi. I-bachelor inokuthi ithathe iingcamango zakho njengengxowankulu kwintsimi yakhe, engayi kuvumela ukuba aphile nomfokazi kwaye yonke imizamo yakho ayiyi kuba nenjongo.
Ungazami ukubonisa i-bachelor ukuba sele eseyindoda yakho. Musa ukusebenzisa izinto zakhe nonke, musa ukuhlala emotweni yakhe ngokuqiniseka ukuba uya kukuthatha apho ufuna khona. Ukukhokelela ekubeni nolwalamano oluqinileyo kunye ne-bachelor ezinikeleyo, kufuneka ukwazi ubuthakathaka bakhe, imikhwa yakhe, imbono yakhe ebomini, into ayithandayo kwaye ayidelele. Musa ukumkholisa ukuba akuxelele kubahlobo nabazali. Ukwakha ubudlelwane obunjalo ukuze ungabi sisiphephelo esiyingozi kwihlabathi lakhe, kodwa ngexesha elifanayo ukuba ungabi sisithunzi, kungenjalo awuyi kuqwalaselwa nhlobo.
Mhlawumbi, ukholelwa ukuba ubudlelwane obunzulu buya kuphula indlela yakhe yokuphila, kwaye ubalekele lo mzuzwana. Ngoku i-bachelor yenza konke njengoko ifuna, kwaye ebomini obumbene uya kufuneka aqikelele ngombono womnye umntu. Ungazibopheli ukuba uya kwiqela le-bachelor, musa ukumcela ukuba akubizele rhoqo. Kungcono ukumcela ukuba abize xa uvumelekile. Musa ukuzenza njengemali. Ukuba uvakalelwa kukuba imali yakhe sele isele ikhona, zonke iinzame zakho zenziwa ize.
Ukuba ngaba isicachelor isetyenziselwa ukuba ungeenxa zonke, kodwa ngexesha elifanayo mnike ithuba lokuhlala yedwa, ukuba ungabi yingozi, ngokukhawuleza uza kunika ukuba ubelane naye kwindawo yokuhlala. Kuya kuba ngcono, ukuvavanya amandla olwalamano lwakho, ngokukhawuleza akuvumelani. Yenza ixesha elincinci libe ngumvavanyo omncinci kuye, kodwa ke uya kuziqhayisa ngokufumana imvume yakho. Kwaye oku kukunceda!
Imigaqo yokuziphatha namadoda kwintlanganiso yokuqala
Indlela yokuziphatha kakuhle nentombazana yomhlobo?
Iipilisi zokulawula ukuzalwa kunye nemiphumo yazo
Izidlo zeenkwenkwezi zaseHollywood ezikhawuleza zinciphise umzimba
Ingubo yomtshato yabantombazana apheleleyo
Indlela yokwenza izandla kunye nezipikili zihle?
Ukunyamekela imilenze yethu!
Iindlela zokutshisa ilanga
Isidlo "iMinstra Tricolore"
Imibala yeenwele - i-glazing